Shacabka waqooyi Bari oo ka hor yimid natiijada ka soo baxday ... | Universal Somali TV
Shacabka waqooyi Bari oo ka hor yimid natiijada ka soo baxday tirakoobka Soomaalida
Soomaalida ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee Kenya ayaa ka horyimid tirakoobka dadweynaha oo dowlada Kenya ay sameysay maalintii shalay taasi oo ay ka soo baxday tiro aan sax Aheyn.
Tirakoobka dadweynaha oo 10-kii sano mar laga sameeyo dalka Kenya ayaa sanadkaan gobolka waqooyiga oo soomaalida degto uu hoos u dhacay taasi oo ay ka caroodeen shacabka iyo hogaamiyeyaasha la soo doortay.
Degmada Dadab oo dadka ku nool nus Malyan ay yihiin qaxooti marka laga soo tago dadka u dhashay asal ahaan deeganka ayaa tiradooda guud waxay noqotay 185,252 Ruux.
Gudoomiyaha gudiga nabadgalyada Cismaan Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Afmaroor oo la hadlay Universal ayaa sheegay in aysan aqbaleyn tirakoobkan Maxkamadna ay u Gudbin Doonaan.
Mr Cismaan oo sii hadlay ayaa dhanka kale tilmaamay in isku dar qaxootiga iyo dadka deegaanka ay ka badan yihiin hal Malyan, balse arintaan ay tahay mid dowlada ay ku dooneyso in aysan ku bixin lacagaha hormarinta maadaama 10-kii sano ee tagtay ay dadweynaha gobolka Kordhee.
Dhanka kale ismaamulka Mandera ee gobolka waqooyi Bari ayaa isna guud ahaan tirada dadweynaha ku nool waxay noqotay 867,457 ruux, tiiyoo ay jirto in dadka codka bixiyay laba sano ka hor doorashadii dhacday ay ka badneyd 1 Malyan.
Guud ahaan Soomaalida Kenya ayaa noqotay 2,490,073 laba Malyan afar boqol waxaana arintaan aad ula yaabay shacabka waqooyi bari maadaama waxba kama jiraan laga soo qaaday kororka dadweynaha ku nool ismaamulada Garissa Wajer iyo Mandera.
Kan-xigaDiblumaasi ka hadlay sida xal looga g...
Kan-horeGudiiga gurmadka fatahaada magaalada ...
53,969,073 unique visits